Kooxda Atletico madrid oo soo xulatay xidigaha ay kaga hortegeyso Levente. Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Kooxda Atletico madrid oo soo xulatay xidigaha ay kaga hortegeyso Levente.
Kooxda Atletico madrid oo soo xulatay xidigaha ay kaga hortegeyso Levente.
Thomas Lemar ayaa lagu wadaa inuu ku soo laabto garoomada kadib markii xidiga Atletico Madrid laga tijaabiyey cudurka loo yaqaan ‘COVID-19’, iyadoo Diego Simeone uu ku soo daray ninka reer France ee ciyaarta uu la leeyahay kooxda Levante.
Dhanka kale, Sime Vrsaljko ayaa seegi doona kulanka sabtida ka dib markii loo tuuray taxaddar sababtoo ah muruq xanuun uu qabay subaxnimadii Jimcaha.
Jose Gimenez iyo Geoffrey Kondogbia ayaa sidoo kale joogi doona Simeone inkasta oo aysan tababar la qaadin saaxiibadooda kale jimcihii, iyadoo Yannick Carrasco uu dhaawac soo gaadhay.
Sidaa darteed, tababaraha reer Argentine wuxuu ku kalsoonaan karaa kaliya 15 ciyaartoy oo kooxda koowaad ah, iyo sidoo kale seddex ciyaartoy oo dhalinyaro ah, kuwaas oo ka kooban liiska 18ka nin ee u diyaar ciyaarta ka dhici doona Estadio Wanda Metropolitano 16:15 CET .
Kooxda Atletico Madrid xidigaha ay usoo xulatay kulanka Levante
Goolhayeyaasha: Jan Oblak, Ivo Grbic
Difaacyada: Jose Gimenez, Renan Lodi, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Alvaro Garcia, Ricard Sanchez
khadka dhexe: Geoffrey Kondogbia, Lucas Torreira, Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Vitolo
Weerarka: Joao Felix, Luis Suarez, Angel Correa, Sergio Camello
Previous articleCarlo Ancelotti oo meesha ka saaray wararka xanta ah ee sheegaya inuu James baxayo.
Next articleChelsea iyo Paris Saint-Germain oo weli isha ku heysa Gianluigi Donnarumma